Sarimihetsika 15 Izay Miresaka Ny Fifandraisana Saropady Misy Amin’i Taiwan (Taioàna) Sy Japàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2017 6:48 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, 繁體中文, Nederlands, 简体中文, عربي, Italiano, English
Araka izany, fony nandositra tanyTaioàna tamin'ny 1949 ny governemantan'ny Kuomintang (KMT) avy any amin'ny Repoblikan'i Shina, taorian'ny nandresen'ny tafika kaominista azy ireo nandritra ny ady an-trano tany Shina ary nametraka tamin-kerisetra ny fahefana tao niaraka tamin'ny lalàna miaramila (1949 – 1987), nahazo toerana ny fahatsapana alahelo momba ny fanjanahantany japoney, na niteny tamin'ireo teratany Taioàney aza ny governemanta miaramila KMT hoe tokony hankahala an'i Japàna izy ireo noho ny fanjanahan'izy ireo an'i Taioàna sy ny fananiham-bohitra nataony tany Shina.
Nandritra ny ady tany Korea tamin'ny fiandohan'ny taona 1950, niaraka niasa ny firenena roa mba hanome vatsy ho an'ny tafika Amerikana. Nitohy io fiarahana miasa io mandra-pametrak'i Japàna fifandraisana mazava ara-diplaomatika amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina ary nanapaka ireo fifamatorana ofisialy tamin'ny Repoblikan'i Shina ao Taioàna tamin'ny 1972 (vokatry ny politika Shina iray tsy mivaky)
Samy notontosain'i Toon Wang, Taioàney mpamokatra horonantsary izy roa ireo.
Nanome aingam-panahy ho anà resadresaka maro izy ity, ary nitarika tanora Taioàney sasantsasany hahita fa ireo raibeny dia efa shonenko fahiny rehefa noresahan-dry zareo tamin'izy ireny ny momba ilay horonantsary.
4. Telo nefa iray: ‘Taiwan Jinsei’ (2009), ‘Taiwan Identity’ (2013) ary ‘Taiwan Banzai’ (hivoaka amin'ny 2017)
Aingam-panahy nalaina avy tamin'ny sarimihetsika Atsuko Sakai, novokarin'i Ming-Liang Tsai, izay Japoney mpanao gazety ihany koa, nitsidika an'i Taioàna tamin'ny 1998. Gaga izy nahita ireo Taioàney zokiolona miteny Japoney ary nanomboka nianatra ny tantaran'ny nanjanahan'i Japàna an'i Taioàna. Ireo tantara roa voalohany ao amin'ilay tantaran'ny telo nefa iray dia mandrakitra ny tantaran'ny taranaka izay niaina teo ambany fanjanahan'ny lalàna Japoney.
Ity sarimihetsika malaza notontosain’i Te-Sheng Wei, Taioaney mpamokatra sarimihetsika ity, dia momba ilay Japoney mpampianatra izay raiki-pitia taminà vehiavy Taioàney, nefa voatery niverina tany Japàna avy any Taioàna taorian'ny Ady Lehibe Faharoa. Nanoratra taratasim-pitiavana fito ho an-dramatoakely izy, nefa tsy nisy lasa ireo. Rehefa maty izy 60 taona taty aoriana, hitan'ny zanany vavy ireo taratasy ary nanapa-kevitra ny handefa azy ireo ho any Taioàna izy, any amin'ny adiresy taloha nipetrahan'ilay ramatoa, Cape No.7.
Nandrehitra adihevitra nahatezitra tao Taioàna ity sarimihetsika ity satria nisy olona sasany nanambara fa maneho fifikirana tafahoatra amin'i Japàna ilay izy. Nosakanana tao amin'ny taniben'i Shina ilay izy nony farany, rehefa nahazo aingam-panahy tamin'ilay sarimihetsika ilay Japoney mpanoratra Shuichi Yoshida ary nanoratra ny bokin-tantara ‘Ru’, momba ny fanorenana ilay rafitra fiarandalamby haingam-pandeha tany Taioàna, nampian'ny orinasa Japoney iray. Nivoaka tamin'ny 2012 ilay boky.
6. ‘Seediq Bale I sy II’ (2011 sy 2012)
Tsy toy ilay sarimihetsika voalohan'i Wei, ireo sarimihetsika roa ao anatin'ity andian-tantara ity dia momba ny Fikomiana Musha — tamin'ny 1930, ny Seediq, vondronà teratany any amin'ny faritra Musha, nanafika ny Japoney mpifehy ho valin'ny famoretana nataon'ny manampahefana Japoney. Na niverina nahazo ny fifehezana ireo faritra ireo aza ny tafika Japoney taorian'ny ady mangotraka, anisan'izany ny fanjerana baomba mandatsa-dranomaso, nanery azy ireo hanova ny politikany manoloana ny mponina ao Taioàna ny zava-nitranga.
Taratry ny fizahantany misy amin'ireo firenena ireo, izay nivoatra haingana tao anatin'ny taona vitsy, ny ‘Riding the Breeze': Tamin'ny 2016, Japoney mpizahatany nanodidina ny 1.9 tapitrisa no nandeha tany Taioàna, ary Taioaney mpizahatany nanodidina ny 4.3 tapitrisa no nandeha tany Japàna.